Excel Ninja Course for Real-World Business | Myanmar Online School
Welcome, Excel Ninjas!
First of all, thank you so much for joining Myanmar Online University. I am so glad that you areapart of this group.
CLASSES ARE SELF-PACED:
The course materials are all available to you right away. This isaself-paced course. You can either enjoy one moduleaday, week, or month. I wanted you to have access to all the content right away since you all have different schedules and busy lives.
Please let me know if you need any further assistance accessing your course, content, and community.
Happy Learning with us!
Founder of Myanmar Online School
Founder of Myanmar Online University
Founder of EduGate Engineering School
Managing Director of Social Trust Co.Ltd
လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ Excel နှင့်ပတ်သတ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို သင်ကြားပေးမည့် Excel Ninja Course for Real World Business သင်တန်း စတင်ပါပြီ။
သင်ခန်းစာများကိုတော့ လက်ရှိဒီCourse ထဲမှာ Section-4 အထိ အခမဲ့လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးထားပါတယ်။
သင်ကြားပုံစနစ်နဲ့ သင်တန်းဆရာရဲ့ အရည်အချင်းကို ယုံကြည်ရင် www.myanmaronlineuniversity.com မှာ ဆက်ပြီး သင်တန်းတခုလုံးကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
• သင့်လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလွန်အသုံးဝင်မည့် Excel formulas နှင့် feature များကို တတ်မြောက်အောင် သင်ပေးပါမည်။
• Excel ကို အခုမှစသင်ယူချင်သည့်သူဖြစ်စေ၊ အခြေခံသိပြီး ပိုမိုကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားချင်သူဖြစ်စေ ဒီ course အပြီးမှာတော့ excel ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
• Interactive Excel Report တွေအတွက် Pivot Tables, Pivot Charts, Slicers နှင့် Time Lines များအား အသုံးပြုနည်း၊
• Microsoft တွင်ပါဝင်သော လူသိနည်းသည့် Excel feature များနှင့် hack များ၊
• Power Query အနည်းငယ်သိရုံနှင့် အလုပ်အများကြီးပြီးတယ်လို့ ပြောရင်မယုံမှာစိုးလို့ Power Query ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းရှင်းပြသွားမှာပါ။
• Challenges, quizzes နှင့် exercises တွေပါဝင်တဲ့ Excel သင်ခန်းစာများကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အချိန်ဝင်ရောက် ဖြေလို့ရပါတယ်။
သင်တန်းအပ်ရန် လိုအပ်သည်များ -
• Windows ပါရှိသော ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်တော့ပ် (Mac တွင် technique များ အလုပ်မလုပ်ပါ။)
• Microsoft Excel 2016, Excel 2019 (သို့) Office 365 (မည့်သည့်် Excel version နှင့်မဆို သင်ယူနိုင်ပါသည် - အသေးစိတ်ကို သင်ခန်းစာအညွှန်းတွင်ကြည့်ပါ။)
• Excel အခြေခံမရှိသော သူများလည်း လေ့လာနိုင်သည်။
• ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်ရှိရင် ရပါပြီ။
Excel အားအစမှ သင်ယူလိုသူများ၊ အခြေခံရှိပြီး ပိုမိုသိရှိသင်ယူလိုသူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ Excel အား သင်ယူချင်သော်လည်း ဘယ်ကစရမှန်းမသိသူများ၊ Microsoft Excel အား အချိန်အတော်ကြာသုံးနေသော်လည်း အတွင်းကျကျထပ်မံ သင်ယူလိုသူများ အတွက် ‘Data Analyst တစ်ယောက်သိသင့်သည့် Excel Skills’ များအား စုစည်း၍ သင်ရိုးတည်ဆောက်ထားပါသည်။ လူတော်တော်များများ ကြုံတွေ့နေရသော excel ပြဿနာများအတွက် အဖြေများပါဝင်ပါသည်။ လူသိနည်းသည့် tips and tricks များလည်း သင်ခန်းစာထဲတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ Excel ကို စတင်လေ့လာမည့်သူများ နားလည်သဘောပေါက်အောင် အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်များပါ ပါဝင်သည်။
Excel မှာပါဝင်တဲ့ feature တစ်ခုချင်းဆီကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် လက်တွေ့ဥပမာများ ပါဝင်တာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း သင်ယူတတ်မြောက်ပြီး data analysis လုပ်ရာမှာလည်း ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်။
Excel formula နှင့် feature တွေက များလွန်းတာကြောင့် သုံးနေကျ မဟုတ်ရင် မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေက သင့်အလုပ်အတွက် လိုအပ်သင့်လျော်တဲ့ solution တွေကို လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာမို့ အချိန်တိုတိုနဲ့ အလုပ်များများပြီးအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို ဒီ excel course ကို သင်ယူသင့်တာလဲ။
Microsoft Excel course တွေ အပြင်မှာ အများကြီးရှိပြီး သင့်ကို function တွေ၊ feature တွေ သုံးတတ်အောင် သင်ပေးတာမှန်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို တကယ့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲထိ အသုံးချတတ်အောင် မသင်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အကုန်လုံးကို မှတ်မိအောင်က လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အများကြီးလုပ်ရပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ course မှာပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ သင်ယူနေတဲ့ တလျှောက် ရိုးရိုးသာမာန်ကနေ ခက်ခဲတဲ့ spreadsheet ဒီဇိုင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ရေးသားတတ်လာမယ်၊ Excel အကြောင်းပိုသိလာပြီး လုပ်ငန်းခါင်မှာပါ လက်တွေ့အသုံးချတတ်လာပါလိ်မ့်မယ်။ formula အသစ်တွေ တတ်မြောက်ပြီး ရှိပြီးသား spreadsheet တွေကို ပိုကောင်းအောင် ရေးဆွဲတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီ course မှာ အပြင်လက်တွေ့မှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲဥပမာတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလေ့ကျင့်ရပါမယ်။ work hard မဟုတ်ပဲ work smart ဖြစ်အောင် သင့်ကို ကူညီပေးမှာပါ။
Beginner တွေအတွက်ပဲ သင်တဲ့ course မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ခန်းစာတွေက Excel ကို အစမှ သင်ယူချင်သူများ နှင့် Intermediate, Advanced level ရှိပြီးသားသူတွေအတွက်ပါ သိသင့်သိထိုက်သည်များ အားလုံးပါဝင်ပြီး Data Analysts အနည်းငယ်သာ သိသော Excel tick များနှင့် hidden feature တွေပါပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ က ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ Advanced level အသုံးပြုသူတွေမသိသေးတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ tips and tricks တွေထည့်သွင်းပါရှိပါတယ်။
သင်ခန်းစာအပြီးမှာတော့ အလုပ်ခွင်မှာ excel ကို အသုံးချကာ သင့်အရည်အချင်းကို ချပြလိုက်ပါ။
• Data input ပြုလုပ်ခြင်း၊ spreadsheet ဖိုင်အကြီးစားများကို navigate လုပ်ခြင်း၊
• အလုပ်မြန်မြန်ပြီးဖို့ excel hack များအသုံးချခြင်း။
• Excel VLOOKUP, IF Function, ROUND စတာတွေသုံးပြီး မှန်ကန်တဲ့ Excel formula ကိုအသုံးပြုကာ သင့်ရဲ့ data analysis အား automate ပြုလုပ်ခြင်း၊
• feature များ အသုံးပြုကာ ဒေတာများကို အစီအစဉ်တကျ ပြင်ဆင်ပြုစုခြင်း၊
• ဒေတာများမှ အဖြေထုတ်ခြင်း၊
• ဒေတာအများအပြားအား တစ်စုတစ်စည်းတည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
• Spreadsheet design principles များအား အသုံးပြု၍ မျကိစိဖမ်းစားနိုင်သော excel report များ ဖန်တီးခြင်း၊
• ရှုပ်ရှက်ခက်နေသော ဒေတာများအား chart အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း၊
• Excel Pivot Tables, Pivot Charts, Slicers, Time Lines များ အသုံးချကာ interactive report များဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူခြင်း
• Get & Transform (Power Query) လို tool တွေနဲ့ ဒေတာတွေကို import လုပ်ခြင်း၊ transform လုပ်ခြင်း စတာတွေကို သင်ယူတတ်မြောက်သွားမှာပါ။
မိမိရဲ့ excel skill ကို စစ်ဆေးဖို့ challenges၊ quizzes တွေ ပါရှိတာကြောင့် function တစ်ခု၊ feature တစ်ခု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသိသွားမယ့်အပြင် ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသား ဖြစ်တာမို့ သင်ထားတာတွေ မေ့မသွားတော့ဘူးပေါ့။ လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ရအောင် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေစုစည်းပါဝင်တဲ့ Excel Course note တွေကို PDF ဖိုင်အနေနဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါေသးတယ်။
ဒီသင်တန်းမှာ ဘာ Excel feature တွေ၊ function တွေကို သင်ယူရမှာလဲ။
• ဖိုင်တွေနဲ့ သုံးနေကျ feature တွေကို အလွယ်ရှာနိုင်အောင် excel interface မှာ ဘယ်လို customize လုပ်မလဲ၊
• ပိုပြီး ရှင်းလင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ report တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် format apply လုပ်နည်း၊
• Excel မှာ အသုံးဝင်တဲ့ drop-down list လိုမျိုး feature တွေကို အသုံးပြုနည်း၊ data validation ကို cell ထဲထည့်သွင်းနည်းများ၊
• Cell ထဲတွင် comment နှင့် note များ ထည့်သွင်းရေးသားခြင်း၊
• Data entry အား Auto-Fill နှင့် Flash-Fill သုံးကာ automate ပြုလုပ်ခြင်း၊
• Data ၊spreadsheet အကြီးများကို navigate ပြုလုပ်နည်း၊
• Data entry နှင့် navigation များအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သောExcel shortcut များ၊
• Excel ဖိုင်များနှင့် worksheets များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
• ဖော်မြူလာများ ရေးရာတွင် လိုအပ်သော Excel rule များ၊
• Basic to advanced အထိ Excel ဖော်မြူလာများ၊ အခြား workbook နှင့် worksheet များကို reference လုပ်ပေးသော ဖော်မြူလာများ၊
• COUNTIFS, SOUNT, SUMIFS, AVERAGEIFS, VLOOKUP, IF ကဲ့သို့သော အသုံးအဝင်ဆုံး excel function များ
• Raw excel data များအား report တစ်ခုဖန်တီးရန် လိုအပ်သော information အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း၊
• Analysis လုပ်ရလွယ်ကူစေရန် ဒေတာများအား စုစည်းတည်ဆောက်ပေးသော excel feature များ (ဥပမာ - Sort, Filter, Search & Replace Go to Special စသည်)
• မိမိအထက်အရာရှိအား ဖိုင်ပေးဖို့ရန် (သို့) PDF အဖြစ်သိမ်းထားရန်အတွက် အသုံးဝင်သော excel printing option များ၊
• Spreadsheet ဖန်တီးရန် Design Principle များ၊
• သာမာန် Column၊ bar charts တွေထက် သာလွန်တဲ့ Pareto chart, Histogram, Treemap, Sunburst chart စတာတွေကို ဆွဲသားနည်း၊
• မိမိဒေတာများအား အသေးစိတ်သိရှိရန် Excel Pivot Tables သုံးနည်း၊
• Excel Power Query ၏ အသုံးဝင်ပုံများ နှင့် အခြား spreadsheet များ မှဒေတာများကို အလွယ်တကူပင် ပေါင်းစည်းဖော်ပြနည်း၊
• Power Query အသုံးပြုကာ ရှုပ်ထွေးသော ဒေတာများကို table နှင့်ပြခြင်း စတဲ့ အသုံးဝင်မယ့် functions and features တွေကို လေ့လာသင်ယူရမှာပါ။
Course တွင် အသုံးပြုထားသော Excel Version
Excel 2019, Excel 2016, Excel for Office 365 များအသုံးပြုလျှင် ပိုအဆင်ပြေပါသည်။ Excel 2010, Excel 2013 တွင် feature များနှင့် formula များအားလုံးနီးပါး သုံး၍ရသော်လည်း အချို့ Excel charts များ (Histogram, Pareto, Treemap, Sunburst Charts) ကတော့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Excel 2010, 2013 သုံးတာဆိုရင် Excel Power Query add-in ကို ကွန်ပျူတာထဲ သွင်းရပါမယ်။ အထက်ဖော်ပြထားသည်များက လွဲလျှင် ကျန် features၊ formula တွေကတော့ ဗားရှင်းအကုန်လုံးမှာ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ဤ course အား တက်ရောက်သင့်သူများ-
• Excel ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်လိုသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊
• စနစ်ကျတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် စိတ်ဝင်စားအောင် သင်ပေးမည့် Excel သင်တန်းမျိုးကို ရှာနေတဲ့ begineer များ၊
• အခြေခံရှိပြီးသားကိုမှ Tips and Tricks အသစ်များကို သင်ယူပြီး အရည်အချင်းပိုတက်အောင် ကြိုးစားချင်သူများ၊
• Excel နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် သင်ယူလိုသော သူများ၊
• အချိန်တိုအတွင်းအလုပ်များများပြီးဖို့ tool အသစ်တွေ သိလိုတဲ့ data analysts များအတွက် တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာ အရည်အချင်း- B.E(Marine Engineering), Executive Master of Development Studies, Microsoft Certified Data Analyst
သင်တန်းကြေး- 45,000 Kyats
ဘဏ်များမှ တဆင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းလိုသူများအတွက် အောက်ပါ ဘဏ်များမှာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ‌Wave Money မှ တဆင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်နည်းနှင့် မဆို ပေးသွင်းပြီးပါက ဖုန်း ၀၉၉ ၆၅၄၀ ၁၂၂ ၊ ၀၉ ၂၆၃ ၂၈၁ ၉၈၉ တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဘဏ်ချလန်(သို့မဟုတ်) ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တစုံတရာကို Viber Phone No. 099 6540 1222 သို့ပေးပို့ပေးကြစေလိုပါတယ်။
မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဘဏ်၊KBZ Pay၊ WavePay တို့မှတဆင့် သင်တန်းကြေးကို ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
WavePay, KBZPay: 099 6540 1222
Section 1 - Before You Dive In
About the Course (5:09)
Section2- Quick Tour of Excel
2.1. Excel Workbook, Worksheet, Cell (16:19)
2.2. Excel User Interface and Ribbon (11:58)
2.3. Customizing the Excel Interface (9:36)
Section3- Data Input & Hidden Excel Features
3.2. Data Entry and Editing Excel Data (11:18)
3.3. Basic Excel Formulas (13:18)
3.4. Text to Speech (Hidden Excel (3:50)
3.5. Correctly Input Dates and Time (7:37)
3.6. Use Excel AutoFill To Do Your Work (6:48)
3.7. Excel Flash Fill for saving your Time (6:42)
3.8. Custom Lists With AutoFill (HiddenFeatures) (7:15)
3.9. Inputting and Editing Comments (5:57)
3.10. Finding Excel Formulas and Input (6:18)
3.11. Excel Data Validation to Reduce (16:49)
3.12. Adding Tool Tips (4:03)
Section4- Worksheet Navigation
4.2 Useful Excel Shortcuts (26:04)
4.3 Copy, Move and Hide Worksheet (6:41)
4.4 Freeze Pane and Split (6:54)
4.5 Hide,Unhide and Adjust rows and columns (12:15)
4.6 Copy, Paste Data(Ninja Feature Included) (12:14)
4.7 Protect Excel Worksheet and Ranges (13:55)
Section5- Excel Formula
5-2_ Overview - Excel Formulas and Order of Precedence (18:18)
5-3_ Simple but Useful Excel Formulas (8:59)
5-4_ Essential Excel Formula Rule (10:42)
5-5_ Absolute and Relative Cells (18:29)
5-6_ Improve clarity with Range Names (11:19)
5-7_ Referencing other Workbooks or Worksheets (9:47)
5-8_ Circular Reference error (2:19)
5-9_ Combine Values From Two or More Cells to One Cell (5:47)
Section-6 Excel Functions
6-2_COUNT, COUNTA, COUNTBLANK (9:28)
6-3_COUNT based onaCondition (15:28)
6-4_ Sum and Avarage Function (8:43)
6-5_ Sum by Criteria(Sumifs,Avarageifs) (11:54)
6-6_ MAX , MIN (MAXIFS , MINIFS) (5:46)
6-8_ Round,RoundUp,RoundDown (15:33)
6-9_ Working with essential excel data and time functions (13:26)
6-10_.Time Calculations in Excel - Total Worked hours (13:13)
6-11_ Handling excel formula errors (9:46)
6-12_IF (Then, Else) Excel Function (19:35)
6-13_ VLOOKUP Function - Lookup Values (8:58)
7-2_Sorting Data (12:31)
7-3_Unsorting Data (3:34)
7-5_Filter to extract data what you need (16:47)
7-6_ Delete Blank or Empty Rows (13:11)
7-7_Fill Empty Cells in One Go (4:15)
7-8_Remove Duplicates to GetaUnique (5:51)
7-9_Find Features (19:57)
7-10_10. Find and Replace Values (8:33)
8-1_Excel Formatting Tips- Alignment, Borders and More (9:52)
8-2_Better than Merge(PRO tips) (6:40)
8-3_Justify Text Length(PRO Tip) (5:16)
8-4_Number Formatting Options (7:45)
8-5_Conditional Formatting-1 (9:09)
8-6_Conditional Formatting with Icon sets and Data bars (13:05)
Section9- Printing Excel Files & Saving as PDF
9-1_Checklist and Section Overview (5:26)
9-2_Useful Printing Options (5:58)
9-3_Set Print Area and Page Breaks (7:40)
9-4_Printing large datasets (11:15)
9-5_Header and Footer (10:07)
9-6_Print and Save as PDF (8:02)
Section 10 - Workbook Design
10-1_Good Spredsheet Design Principles (18:18)
10-2_Hyperlinks and Pro Tips for Business (14:11)
10-3_Define Cell Styles and Create Default Table Style (8:52)
10-4_Excel Workbook Colors and Themes to save time (7:04)
10-5_Excel Template Creation (5:38)
Section11-Working With Excel Charts
11-1_Chart Basics (8:02)
11-2_How to format chart options (19:39)
11-3.How to analyze data using comparison on two series(Method-1) (13:58)
11-4_Comparison Excel Charts - Actual Variance(Method-2) (11:33)
11-5_Combination Charts(PlusaHidden Excel Feature) (8:12)
11-6_Dynamic Chart Ranges with Excel Tables (4:04)
11-7_Pareto Histogram Charts (12:42)
11-8_Treemap Chart in Excel (16:53)
11-9_Sunburst,Pie and Donut Charts (16:53)
Section 12 -Data Analysis with Excel Pivot Tables
12-1_DataAnalysis with Pivot Tables Introduction (20:19)
12-2_Different Pivot Tables in One Worksheet (9:32)
12-3_Slicer Intro and Report Connections (12:11)
12-6_Profitiability and Find Anomalies (12:53)
New Perspectives Microsoft Office 365 & Excel 2016 Comprehensive_Module-1
Ebook and Data files Download
1.Why we should learn via book (3:20)
2.Business Scenerio and Openaworkbook (22:26)
3.Using Keyboard Shortcuts to Work Faster (5:47)
4.Exploringaworkbook (4:47)
5.Navigating withinaworksheet (10:38)
6.Selectingacell range(Ctrl vs Shift) (2:48)
7.PlanningaWorkbook (16:00)
8.Startingaworkbook (9:38)
9.Entering Text,Editing Cell Content (16:20)
10. Entering Dates and Numbers (19:14)
11.Resizing Column Widths and Heights (5:44)
12.Performing Calculations with Formulas (6:45)
13.Entering Functions with AutoSum (6:33)
14.How to write effective formulas (9:43)
15.Moving and Copyingacell or Range (4:10)
16.Count Function (3:50)
17.Insertingarow or column (7:00)
18.Flash Fill (4:08)
19.Adding Cell Borders and Change Font Sizes (6:44)
20.Changing Worksheet Views (3:23)
21.Changing the Page Orientation (2:10)
22.Setting the Scaling Options (5:22)
23.Viewing Worksheet Formulas and Save asanew file name (10:42)
24.Review Assignment Submit (17:44)
25.Case Problem 1 (9:32)
26.Case Problem2(15:10)
27.Case Problem3(13:02)
28.Case Problem4(21:24)
Module-2 Formatting Workbook Text and Data
1.Case Introduction_Morning Bean (2:41)
2.Applyingafont color (8:26)
3.Addingabackground color (3:42)
4.Using formula and functions to calculate Sales Data (14:45)
5.Calculate subtotal of each store and each month sales (10:08)
6.Formatting Numbers (13:24)
7.Formatting Dates and Times (2:49)
8.Aligning Cell Content (2:25)
9.Indenting Cell Content (2:04)
10.Adding Borders to Cells (11:32)
11.Merging Cells (5:22)
12.Rotating Cell Contents (2:47)
13.Exploring the Format Cells Dialog Box (8:54)
14.Calculating Average Values and Apply Double Border Lines (8:02)
15Applying Cell Styles (3:56)
16.Copying Formats with Format Painter (10:12)
17.Find and Replace Text and Formats (8:30)
18.Working with Themes (4:22)
19.Highlighting Cells Based On Their Values (7:56)
20.Highlighting Cells withaTop-Bottom Rule (9:07)
21.Using Page Break Preview (3:10)
22.Defining the Print Area (3:44)
23.Manual Page Break in the print area (2:32)
24.Adding print titles (7:58)
25.Designing Headers and Footers (7:07)
Module-3: Performing Calculations with Formulas and Functions
1.Introduction to the Module-3 Case (4:18)
2.Making Workbooks User-Friendly (9:07)
3.Documenting Formulas (6:14)
4.Calculate the annual income based on sample plot (13:43)
5.Input and Calculated Values Formatted with cell styles (3:08)
6.Understanding Function Syntax (6:59)
7.Count and Counta functions (7:56)
You can also join these courses.
Advanced Excel Formula and Functions Course
Everything you need to learn about Advanced Excel Formula and Functions
Microsoft Word Fundamental Skills for your career
Foundation Course to learn Microsoft Word
VideoMakerFx, Easy Animated Video Creation Online Course for Marketers and Business Owners
Everything you need learn how to create animated videos withinafew minutes